ढोरपाटन नगरपालिकाको बर्खेनीमा मध्य राति बम पड्कियो, बिभिन्न स्थानमा वम फेला ! – ebaglung.com
ढोरपाटन नगरपालिकाको बर्खेनीमा मध्य राति बम पड्कियो, बिभिन्न स्थानमा वम फेला !
२०७४ मंसिर १०, आईतवार ०८:०५	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
छबिलाल पाण्डे, बागलुङ २०७४ मंसिर १० । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका अन्तर्गत बिभिन्न स्थानमा आईतबार विहान वम फेला परेका छन् । नगरपालिकाको वडा नं ६ वर्खनी भन्ने स्थानमा आज रातको १२ बजेतिर जंगलको बिचमा वम बिस्फोटन भएसँगै स्थानीय त्रसित बनेका छन् ।
सो क्षेत्रमा रातको समयमै नेपाली सेनाको टोली पुगेर आबस्यक सुरक्षा ब्यबस्था कडा पारिएको बताईएको छ । वम पड्किएपनी कुनै मानवीय क्षेति भने भएको छैन ।
त्यस्तै ढोरपाटन नगरपालिकाकै वडा नं १ बुर्तिबाङ बजार देखि २ को रिनाम भन्ने स्थानमा जाने सडक छेउमा आईतबार बिहान स्थानीयले शंकास्पद बस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गर्दा वमनै भएको पुष्टि भएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङको टोलीद्धारा सो क्षेत्रको अध्ययन गरेसंगै नेपाली सेनाको टोलीव्दारा बिहान ८ बजे वम डिस्पोजल गर्ने तयारी भईरहको ईलाका प्रहरी कार्याालय बुर्तिैबाङका प्रहरी निरीषक कृष्ण रानाले बताए ।
यस्ता घटना बद्दै जादा मतदाता त्रसित भएका छन् । तर प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कडा पारिएका कारण कुनै त्रास नमान्न मतदातालाई आग्रह गरेको छ । जिल्लामा मतदाताहरु सक्रिय पुर्वक मतदान स्थलतर्फ जाने क्रम जारी छ । मतदान प्रकृया समेत अधिकांस स्थानमा सुरु भएको छ ।
अपडेट : बागलुङमा पहिलो चरणको मतदान सुरु, बिहान सबेरै देखी मतदाताहरु लाईनमा